feline alopecia ၏အကြောင်းရင်းများ | Noti ကြောင်များ
feline alopecia ၏အကြောင်းရင်းများ
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | ရောဂါများ
ငါတို့ကြောင်ကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ သူ့ကိုအမြဲတမ်းကျန်းမာစေချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေပြitနာတွေကသတိမထားမိဘဲပေါ်လာတတ်တယ်၊ သူတို့အားအံ့သြဖွယ်အံ့သြဖွယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် feline alopeciaဆိုလိုသည်မှာသင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အချို့နေရာများတွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကြောင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကြောင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကအရေပြားရောဂါများ (ဆံပင်၊ ကပ်ပါးကောင်များ) သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ကပ်ပါးကောင်များ၌ယားယံခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်သန့်ရှင်းစွာသန့်ရှင်းခြင်းဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
1.3 Cushing ရဲ့ရောဂါ
အဲဒီအချိန်တုန်းက အဆစ်များ၌နာကျင်ကိုက်ခဲနေသောကြောင်များတွင် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆံပင်မရှိသောအစိတ်အပိုင်းများလည်းရှိနိုင်သည် သူ၏ရောဂါဝေဒနာကိုသက်သာစေရန်ကြိုးစားစဉ်တွင်၎င်းကိုအမြန်ဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုရှိသောကြောင်များသည်များသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်အကျွံဂရုစိုက်သောကြောင့် alopecia ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကြောင်၌၎င်းရှိသည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်၏အိမ်တွင်အေးဆေးစွာနေသင့်သည်။
လူသားများသို့ကူးစက်နိုင်သောမြွေဆိုးများကဲ့သို့သော feline alopecia ၏အကြောင်းရင်းအချို့ရှိသည်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကုသရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိရန်၎င်းတို့ကိုသီးခြားစီတွေ့မြင်မည်။ ဤနည်းဖြင့်သာလျှင်မြန်ဆန်စွာပြုမူနိုင်လျှင်သင်၏ကြောင်သည်အမြန်ဆုံးဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့် Alopecia ရှိနိုင်သည်။
မလွတ်စေနဲ့ အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများကဒါကြောင့်သင်မည်သို့ပြုမူရမည်ကိုသိလိမ့်မည် အမှု၌ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ခုခုသည်သင်၏ကြောင်မှဖြစ်ပျက်နေသည်။
ဤသေးငယ်သောသက်ရှိများသည်ကြောင်ကိုကိုက်လိုက်သည် ယားယံခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောခြစ်ရာမှစ, သင်သည်ဆံပင်မရှိသောဒေသများနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေကိုအရမ်းထိန်းချုပ်ထားရမယ်၊ ကပ်ရောဂါပြီးတော့နားကြပ်တစ်မျိုးရှိတယ်။ ကြောင်ကနေကြောင်အထိ၊ လူကြောင်အထိကူးစက်လွယ်တယ်။
ကုသမှုပါဝင်သည် သွင်းဖယ်ရှားပစ်သော antiparasitics အပေါ်ထားတော်မူ၏နှင့် အကယ်၍ သင့်တွင်အနာဖေးရှိလျှင်၊ \_ t သွေးကြောသွင်းတိရစ္ဆာန်ဆေးပေးရမည် ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ဖျက်လို့ရပါတယ်
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကြောင်များတွင် alopecia the ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဓာတ်မတည့်မှုအချို့ရှိနိုင်သည် အစားအစာ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။ ယခင်အစားအစာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစာများစွာပါ ၀ င်သည့်cereရိယာသေးငယ်သည့်အရေပြားနီခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ပျံ့နှံ့နိုင်သည်ကဲ့သို့သောအစာမစားနိုင်သည့်အချို့သောအစားအစာများစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပန်း ၀ တ်မှုန်သို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တာမျိုးများကိုရှူရှိုက်မိခြင်းသည်လည်း alopecia ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကုသမှုတွင်ပါဝင်သည် ဝေးတာမျိုးကနေကြောင်ကိုစောင့်ရှောက်လော့ ယားယံခြင်းနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းသည် adrenal gland များမှ steroid hormones ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြထားသော glandular ရောဂါဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်အချိုးကျပုံစံအတွက်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု.
အဆိုပါကြောင်သည်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည် အလွန်ပညာရှိသောအချက်ရန် စိတ်ဖိစီးမှု, ပျင်းသို့မဟုတ်အိမ်၌ဖြစ်ပေါ်သောအပြောင်းအလဲများကိုဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုရှောင်ရန်တိရစ္ဆာန်သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရမည်။ ထိုက်တန်သလိုလိုချင်တယ် နှင့်တူထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါ ဖေလီ သင်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေကိုကျော်ဖြတ်သွားလျှင် (ဥပမာအားဖြင့် vet သို့သွားသည်) ။
ဒါဟာအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်တစ်ကောင်သည်ကြောင်ကိုကိုက်။ ၎င်းသည်ယားယံခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုခြစ်ရာ။ များသောအားဖြင့်ဤအရာသည်ကြီးလေးသောပြproblemနာမဟုတ်သော်လည်း၊ သင်သည်သင်၏အရေပြားပေါ်ရှိအနာဖေးများနှင့်အကြေးခွံများနှင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်.
၎င်း၏ကုသမှုရိုးရှင်းပါသည်။ ပါဝင်သည် တစ် ဦး antiparasitic ထား၏ pipette၊ ကော်လာ၊ ဒါမှမဟုတ်သူ့ကို VET ကအကြံပြုထားတဲ့ဆေးပြားပေးပါ သင်သည်ထိုသူတို့ဖျက်ပစ်ရန်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှအကြံပြုထားသည့်အထူးခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ကြောင်ကိုရေချိုးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ကြောင်များတွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသည်သိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည်ပုံမှန်လည်ပတ်နေခြင်းမရှိကြောင်းပြသနိုင်သည်။ ဂလိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောရောဂါများဖြစ်သော hyperthyroidism သို့မဟုတ် hypothyroidism ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် flaking နှင့် alopecia.
ကုသမှုတွင်ပါဝင်သည် မင်းကိုဟော်မုန်းပေးပါ ဂလင်းက၎င်း၏ function ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြန်လာနိုင်အောင်။
ပထမဦးဆုံး VET သည်သင်၏ကြောင်ထဲတွင် alopecia ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ငရုတ်ကောင်းကုသမှုသည်မြဝင့်ကုသမှုနှင့်မတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် VET သည်သင့်ကြောင်တွင် alopecia ရှိတယ်လို့သံသယရှိလျှင်သူသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemနာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဖြစ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျသူတို့အားစိတ်ဖိစီးမှုအစပျိုးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ပါတယ် အဘယ်သူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရနှင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကုစားရှာအံ့သောငှါ။ သင့်ရဲ့ကြောင်အိမ်ထဲမှာသင်နှင့်သင့်မြတ်အောင်ရှာရန်ကြိုးစားပါ။
ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးနောက်သင်၏ကြောင်သည်ဆံပင်ကျွတ်နေသည့်အကြောင်းရင်းကိုသင်မသိသေးပါကအရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်ကြီးဌာနသို့သွားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
များသောအားဖြင့် alopecia ထူးဆန်းမှုက၎င်းကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ခွေးလှေးများ၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အခြားပြproblemနာများအပေါ်မူတည်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကုစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
သို့သော်အရေပြားရောဂါအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသတိရပါ။ သူသည်သင်၏အသားကောင်နှင့်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုသင်အကောင်းဆုံးကူညီပေးမည့်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှု၌၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည် ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူထံသွားခြင်းကကောင်းသည် နှင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကုစားနည်းလမ်းများနှင့်အတူစတင်ပါ။
ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း feline alopecia သည်ကြောင်အားမကျန်းမာကြောင်းလက္ခဏာပြနိုင်သည်။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်တစ်စုံတစ်ရာမှားနေသည်ဟုသင်သံသယရှိပါက Vet သို့သူ့ကိုမသွားရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Noti ကြောင်များ » ကြောင်များ » ရောဂါများ » feline alopecia ၏အကြောင်းရင်းများ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကြောင်တွင် alopecia ရှိသော်လည်းမည်သည့်ရောဂါဗေဒသည်မှန်ကန်ကြောင်းမသေချာပါ။ ထို့ကြောင့်သူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလားသိနိုင်ပါသည်။
သူမဆံပင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူက licks နဲ့ licks ကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခါတလေသူမအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့တာနဲ့ရုတ်တရက်သူကခုန်ပြေးပြေးပြေးလာလာတယ်ခြေထောက်လှုပ်လိုက်တယ်။ ဒေသတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုပါစို့ပြောရရင်ငါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားပြီးသူမကိုဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ
မင်္ဂလာပါ Karina ။
ငါသူ့ကို VET ခေါ်ဖို့အကြံပေးပါ သူသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်ရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။
သင်၏ဆောင်းပါးသည်အလွန်မပြည့်စုံပါ၊ ကြီးလေးသောအမှားများရှိပါသည်။ Feline hypothyroidism မရှိခြင်းနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည် hyperthyroid တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ဟော်မုန်းများဖြင့်ဆေးဝါးများသောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဂလင်းသည်ပြန်လည်အလုပ်လုပ်သည်။ ပြproblemနာမှာအလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးကုဆရာဝန်ထံမှအကြံဥာဏ်ရယူပါ။